နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ် (Mi Mi Win Pe – The Memories still Linger on.. ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ် (Mi Mi Win Pe – The Memories still Linger on.. )	21
နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ် (Mi Mi Win Pe – The Memories still Linger on.. )
Posted by မြစပဲရိုး on May 9, 2015 in Music, Photography | 21 comments
အိမ်ပြန်တိုင်း မပျက်မကွက် သွားရတဲ့ နေရာ လေး တစ်ခု ရှိပါရဲ့။
အဲဒီ မှာ အမှတ်အသား နေရာ ခြေရာလေး တွေ အများကြီး။
ဂျပ်ဆင် နား က စင်္ကြန်လမ်းတွေ၊
အာစီ ထဲ က ဘောလီဘောပွဲ တွေ၊
သစ်ပုတ်ပင်ကြီး နား က အုတ်ခုံ တန်း တွေ၊
အီကို ရှေ့က မြက်ခင်း စိမ်းစိမ်း တွေ၊
အဓိပတိလမ်း က ကံ့ကော်ပင် တွေ၊
တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက် ရဲ့ လှေခါးထစ် တွေ၊
ဘွဲ့နှင်းသဘင် တစ်ဝိုက်က ဖြတ်လျှောက်နေကျ လမ်းလေး တွေ၊
အင်းလျား ဘေးက အကြော်ဆိုင်တွေ၊
ဘယ်တော့ မှ မမေ့မဲ့ အမှတ်တရ လေး တွေ ကို ကြည့်ပြီး
အတိတ် ကိုပြန် လွမ်း နေတတ်တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်…
အရင်ကတော့ ဒီလို အဖွားကြီး ဖြစ်ချိန် လာလာပြီး ပြန်ကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သိခဲ့ပါ့မလဲ။
အဲဒါတွေ နဲ့ နွယ်ပြီး ပါတ်သက် သက်ဆိုင်သူများ ထဲ က ရော
ဒီလို သတိရ နေဖူးလား ၊ ဒီလို လာလာချောင်းတတ်လား တစ်ခါတစ်ခါ တော့ သိချင်သား။
အများစု ကတော့ လက်ရှိ ဘဝ တိုက်ပွဲ တွေထဲ အတိတ် တွေ ကိုမေ့ချင်လဲ မေ့ နေလောက်ပြီ ထင်ရဲ့။
ကိုယ့် အဖြစ်ကို သိကြရင် မထင်ရဘူးပြောကြမလား။ ကြောင် နေပြီ ထင်ကြမလား။
ဒီလို သတိရဖို့ အချိန်မရှိပါဘူး လို့ ပြောကြမလား။
ကိုယ်က ဘဲ ထူးပြီး ခပ်ဂေါက်ဂေါက် ဖြစ်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ။
ငယ်ဘဝ ထဲမှာ ပြန်လှည့်လို့ ကြည့်ပျော် ခဲ့ တဲ့ အတိတ်လေးများ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …..
ကျွန်မ ရဲ့ ချစ်စွာသော အမိတက္ကသိုလ်။ :-)
မီမီဝင်းဖေ – တို့သတိရနေမှာပါ
ကန်ရေပြင် မြေနီလမ်း တို့နဲ့ဝေး
စွယ်တော် ခုံပြာတန်း တို့နဲ့ဝေး
ယုံပါကွာ အချစ်ဆုံး မင်း ကို
တို့တော့ သတိရနေမှာပါ …
အိမ်ပြန်ချိန် တို့ခွဲ တစ်လမ်းစီမို့
ပြန်လည် ဆုံဆည်း ကြနိုင်ဖို့
ကံ ကို မျှော်လင့်ရင်း အဝေးက
တို့ သတိရနေမှာပါ …
လိုက်ဘရီ လေးလဲ တို့ နဲ့ဝေး
အာစီ လေးလဲ သတိရမိတယ်
ဂျပ်ဆင်အိုလေး ဘယ်မမေ့ဘူး …
ကြင်နာသူတွေ ရဲ့ ကံ့ကော်တန်း
ရင်မှာ သံမှိုစွဲ နှလုံးအိမ်ထဲ
အီကိုသူ ရဲ့ အမိမြေ
လရိပ်ပြာ ရဲ့ ဂျပ်ဆင်အို
မြစပဲရိုး says: သိုးဆောင်းလို ပေးချင်ပေမဲ့ ကဘာဆန်ဆန် လှလှလေး မပေးတတ်လို့။ တစ်ယောက်ယောက် ကူပါ။ “တို့သတိရနေမှာပါ” ကို ဘယ်လို ခေါင်းစဉ်တတ်ရပါ့။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အဲ့ သီချင်း အရင်ဆိုတာ မီမီဝင်းဖေ မဟုတ်ဘူးလား လို့…
ထိပ်ဆုံး ဆိုခဲ့တာက …
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော်ဂျီး လူထု အမေကြိုင် မဟုတ်လား ဟင်င်င်င်င်
မြစပဲရိုး says: သိဝူး။
ရှိလဲ မင်းဘဲ အားပေး ပေရော့။ lol:-)))
ခင်ဇော် says: The Memories still Linger on ..!!!
မြစပဲရိုး says: ယူတယ် ကွယ်။ Thanks my dear!!!
ကျန်သူများ လဲ ထပ်လာပါဦး။ :-)))
kai says: 思い出がいっぱい
uncle gyi says: သစ်ပုတ်ပင်ကြီးကရှိသေးလို့လားအရီးရဲ့
မြစပဲရိုး says: ရှိသေးတယ် အန်ကယ်ကြီး။
နာဂစ် တုန်း က ပါသွားပြီထင်တာ။ အတော်ခိုင်တာဗျာ။ :-)
အဲဒါ အခုမှ ရိုက်ခဲ့တာ။အရွက်တွေ တော့ ဝေမနေရှာဘူး။ ခြောက် နေတယ်။
ကူမားရ် says: will keep on dream,aposteriori.
Alinsett @ Maung Thura says: အတိတ်တချို့က… ပြန်မတွေးချင်လောက်စရာတွေ…
အဲဒီထဲမှာမှ… ပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူးမိစရာ အတိတ်လှလှလေးတွေလည်း… ပြန်တွေးစရာ ရှိသေးတယ်ပေါ..
အားလုံးကို စွန့်လွှတ်ရရင်တောင် သတိရခြင်းကို ငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တာရာမင်းဝေ စာသားလေးလိုပေါ…
သတိရခြင်းဆိုတာ… သတိရတတ်သူတိုင်း ပိုင်ပါတယ်… သူတို့လည်း သတိရနေမှာပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: . ကျေးဇူးကြီးပါ မောင်ကလေးကူးမားရ်။
ကလေးနှစ်ယောက် နဲ့ အလုပ်များနေမှာမြင်မိနေပါတယ်။
အိမ်မက်များ လဲ အမြန်ဆုံး အပြင်ရောက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
တစ်ချို့ သတိရခြင်း တွေ က သတိရ နေရတာ တန်တယ်။
မတန်တာ တွေ ကိုတော့ လွှင့်ပစ် လိုက်ရင် အကောင်းဆုံးပါဘဲ လို့ ထင်တာပါဘဲ။
တာရာမင်းဝေ ရဲ့ စကား လေး မျှပေးလို့ သင်းကျူးကြီး ပါ။
padonmar says: မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားခေတ်ဦးပိုင်းက တင့်တင့်ထွန်းဆိုခဲ့တာ.
အောင် မိုးသူ says: ကိုယ်မတက်ခဲ့ရပေမယ့် အဲ့သီချင်းလေးကြားတိုင်း ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ ခံစားရတယ်။
တောင်ပေါ်သား says: ( စောင့်နေကျ စာကြည့်တိုက် ) ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုစောင့်တာလဲဟင် ? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
အရီး လေး says: ​ကျောင်းကြီးကို​တွေ့တိုင်း ​ပျော်​ရွှင်​ခဲ့ရတဲ့
တက္ကသိုလ်​ ​ကျောင်းသူ ဘ၀ကို လွမ်းတယ်​
အ​ဆောင်​​နေ ​ကျောင်းသူဘ၀ ကို သတိရတယ်​
​ကျောင်းကြီးထဲ​ရောက်​ရင်​ တခဏ​တော့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို
မြစပဲရိုး says: ဟား တို့ အရီးလေး လဲ ပြန်ပေါ်လာပြီ ကွ။
ဘယ် အဆောင်မှာ နေခဲ့တာတုန်း။
ဒီလို လူဟောင်း တွေ ပြန်တွေ့ရတာ တကယ်ဘဲ ဝမ်းသာမိတယ်။
အမြဲတမ်း မဟုတ်ပေမဲ့ ခဏခဏတော့ အသံလေး တွေ ပြ ပေးနိုင်ကြရင် ကောင်းမှာ။
naywoon ni says: ​အောက်​ဆုံးကပုံ စာတပ်​​ပေးထားတာ​တော့ မိုက်​စိ မှမိုက်​စ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အစ်မဒုံ ပြောမှ ခပ်ရေးရေး သတိရသလိုဘဲ။ တင့်တင့် ထက် မီမီ ကိုဘဲ ပိုကြိုက်တယ်။
. မောင်အောင် ရေ – အရီး က ကျောင်းဆွေး လူဆွေး ဖြစ်ခဲ့တာမို့ သူများ တွေထက် ပိုပြီး လွမ်းနေတာလဲ နေမှာ။ ကိုမျိုး
စောင့်ရမဲ့ သူ ရှိတယ်လို့ သများကို အထင်ကြီး တယ်လား။ အဘနီ
အဲ့ဒါကြီး က တကယ် သံချေးတက် နေတာဗျ။
Mike says: .အမှတ်ရစရာတွေများလွန်းလို့ …ကျောင်းထဲမသွားဖြစ်ဘူး
.မှတ်မှတ်ရရ..စစ်ကိုင်းလမ်းက ကန့်ကော်ပင် ပေါ်တက်ဖူးခဲ့သေး..ဟေးဟေး
.တက်တော့သာ ကြို့ကုန်းမှာ..ရာဇူးထဲနေချိန်ကပိုများခဲ့သလိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
မောင်​မာဃအတွက် သတိရစရာဆိုရင် မန္တ​လေး မတ္တရာလမ်းရယ်​ ​အတန်းဝက ​ငေးရင်​ လှမ်းမြင်​​နေရတဲ့ ​ရွှေ​ဖောင်​ဦး​တောင်​ရယ်​ computer lab ကို သွားတိုင်း ဖြတ်​ရတဲ့ ခ​နော်​နီ ခ​နော်​နဲ့ တံတား​လေးနဲ့ ​မြေလမ်း​လေး(ဟိုအ​ကောင်​​တွေလဲ ခဏခဏ ထွက်​လာရဲ့)ရယ်​ပဲ သတိရစရာရှိတယ်​
black chaw says: အဆင် မသင့် လှတဲ့ ကိုယ်မွေးရာ
အို ချမ်းမြေ့မှု ပေးစွမ်းနိုင် ရာ
ဒီနယ်မြေ လေး ရောက်တော့ကွယ်။
အခု အချိန်ထိလည်း ဒီလို ခံစားမှုမျိုး